Muuse suudi oo muqdisho kula kulmay madaxweynihii hore shiikh shariik shiikh axmed – Soomaali 24 Media Network
Muuse suudi oo muqdisho kula kulmay madaxweynihii hore shiikh shariik shiikh axmed
Senotar Muuse suudi yalaxoow ayaa xalay magaalada muqdisho kula kulmay madaxweynihii hore ee dowladdi KMG Soomaaliya oo shalay galinkii hore dalka dib ugu soo laabtay.
wararka aan ka helayno ayaa sheegaya in muuse suudi iyo maxadweyne shiikh ay ka wada haleen murankii ka dhashay dhulka uu deggan yahay senotar muuse suudi oo uu maamulka gobalka banaadir amar ku baxshay in laga saaro.
Muuse suudi yalaxoow ayaa sheegay in dowladdii KMG ahayd oo uu hoggaaminayey shiikh shaeiif shiikh axmed ay siisay documents muujinaya la haanshiyaha dhulkaas dammaanadna uu u haysto degganaanta dhulkaan.
ila ku dhowdhow shiikh shariif ayaa xaqiijiyey in uu muuse suudi u ballan qaaday xallinta khilaafka ka dhexeeya asaga iyo dowladda hoose ee muqdisho.
sidoo kale guddoomiyaha gobolka banaadir Eng yariisow ayaa wareysi uu bixiyey ku sheegay inaan marnaba laga laaban doonin go,aankii horay uga soo baxay xafiiskiisa cid kasta oo dhul dan guuda degganna laga saari doono.
dowladda federaalka soomaaliya ayaa sidoo kale horay ushaacisay in la soo celin doono dhulalka danta guud ee ay siyaabaha kala duwan ku haystaan siyaasiyiinta iyo masuuliyiinta dowladda ka tirsan.
hase yeeshee kulankan dhex maray madaxweynihii hore shiikh shariif iyo muuse suudi ayaa la rejaynayaa inuu wax badan ka beddali doono khilaafka muddada dheer soo jiitamayey ka taagan dhulka uu dheggan yahay muuse suudi oo aan wali xal waara laga gaarin.
Previous Kenya iyo Ethiopia oo ka wada hadlay arimo ku saabsan Dekadaha dalka Soomaaliya.
Next Sheekh Shariif “ Waxaa faraha baxay Amnigii dalka, Kamana aamusi karno arrimaha qaar”